INDLELA LUNGISA IPHONE FROZEN OKANYE ITSHIXIWE - ITHAMBILE
Indlela Lungisa iPhone Frozen okanye itshixiwe
I-Android engumkhenkce inokulungiswa ngokususa kwaye iphinde ifake ibhetri. Kwelinye icala, izixhobo ze-Apple ziza nebhetri eyakhelweyo engasuswayo. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ufumane ezinye izisombululo xa isixhobo sakho siba ngumkhenkce.
Xa i-iPhone yakho ifriziwe okanye itshixiwe, uyacetyiswa ukuba unyanzele ukuba uyivale. Imiba enjalo ihlala ivela ngenxa yofakelo lwesoftware engaziwayo kunye nengqinisisiweyo. Ke ngoko, nyanzela ukuqala kwakhona isixhobo sakho se-iOS yeyona ndlela ilungileyo yokubasusa. Ukuba nawe, ujonge ukwenza njalo, sikuzisa esi sikhokelo sigqibeleleyo esiza kukunceda ukulungisa umba ovaliweyo we-iPhone.
Indlela ye1: Cima isixhobo sakho se-iPhone
Indlela yesi-2: Ungayinyanzela njani i-iPhone eKhayo
Ungayilungisa njani i-iPhone ifunyenwe ngexesha lokuqalisa
Ukuba isikrini sakho se-iPhone asiphenduli kwibala okanye sibambekile ekusebenzeni kwaso, zama ukusicima. Ukuba ayisebenzi, khetha ukuqala kwakhona ngamandla.
Ukulungisa iscreen se-iPhone esitshixwayo okanye esomileyo, cima ifowuni yakho uze usivule. Le nkqubo iyafana nokusetha kwakhona okuthambileyo kwe-iPhone.
Nazi iindlela ezimbini zokucima i-iPhone yakho:
1A. Sebenzisa kuphela iqhosha laseKhaya
1. Cinezela ubambe ikhaya / ukulala iqhosha kangangemizuzwana elishumi. Iya kuba sezantsi okanye kwicala lasekunene lefowuni, kuxhomekeke kwimodeli yesixhobo.
i-usb drive kukubhala ikhuselekile windows 10
2. I-buzz ivela, kwaye emva koko isilayidi ukucima umbane ukhetho luyavela kwiscreen, njengoko kubonisiwe ngezantsi.
3. Silayida usiya ngasekunene ku Cime ngaphandle i-iPhone yakho.
1B. Sebenzisa iqhosha laseCaleni + leVolumu
1. Cinezela ubambe IVolumu phezulu / IVolumu ezantsi + kwicala amaqhosha ngaxeshanye.
2. Shenxisa pop-up ukuya Cima i-iPhone yakho 10 nangaphezulu.
Phawula: UKUVULA i-iPhone yakho, cinezela kwaye ubambe iqhosha lasecaleni okwethutyana.
Funda kwakhona: Ungazikopa njani iiLuhlu lokudlalwayo kwi-iPhone, i-iPad, okanye i-iPod
Nyanzela ukuqala kwakhona i-iPhone yakho ayizukuchaphazela okanye icime imixholo ekhoyo kwisixhobo sakho. Ukuba isikrini sakho simile okanye senziwe mnyama, zama ukulungisa i-screen esitshixwayo se-iPhone ngokulandela amanyathelo adweliswe apha ngezantsi.
2A. Iimodeli ze-iPhone Ngaphandle kweQhosha lasekhaya
1. Ngokukhawuleza cinezela IVolumu phezulu iqhosha kwaye uyikhulule.
2. Ngokunjalo, cinezela ngokukhawuleza IVolumu ezantsi iqhosha kwaye uyikhulule.
3. Ngoku, cinezela ubambe Amandla (kwicala) iqhosha de i-iPhone yakho iqale phantsi.
2B. Ungayinyanzela njani i-iPhone 8 okanye kamva
1. Cinezela u IVolumu phezulu iqhosha kwaye ulishiye ngokukhawuleza.
Phinda okufanayo neefayile ze IVolumu ezantsi iqhosha.
3. Emva koko, cinezela ixesha elide Icala iqhosha kude kube ilogo yeApple ivele kwiscreen.
4. Ukuba une Ikhowudi yokudlula yenziwe kwisixhobo sakho, emva koko uqhubeke ngokufaka ipasikhowudi.
2C. Ungayinyanzela njani i-iPhone 7 okanye i-iPhone 7 Plus (isizukulwana sesi-7)
indlela yokucaphula umntu ngokungavisisani
Ukunyanzela ukuqala kwakhona kwe-iPhone 7 okanye i-iPhone 7 Plus okanye i-iPod touch (7th generation) izixhobo,
1. Cinezela ubambe IVolumu ezantsi iqhosha kunye Ukulala / Vusa iqhosha imizuzwana elishumi ubuncinci.
2. Qhubeka ucinezela la maqhosha de i-iPhone yakho ibonakalise ilogo ye-Apple kwaye iphinde iqale kwakhona.
Ukuba i-iPhone yakho iyabambeka ukubonisa i-logo ye-Apple okanye isikrini esibomvu / esiblowu sivela ngexesha lokuqalisa, funda apha ngezantsi.
1.Fakela eyakho I-iPhone kunye nekhompyuter yakho usebenzisa intambo yayo.
2. Vula iTunes .
3. Khangela i-iPhone kwisistim kwaye uqinisekise ukuba isixhobo sixhunyiwe ngokufanelekileyo.
Landela la manyathelo ukulungisa i-iPhone iyabambeka ngexesha lokuqalisa.
3A. Iimodeli ze-iPhone Ngaphandle kweQhosha lasekhaya
1. Ngokukhawuleza cinezela Iqhosha levolumu phezulu kwaye uyikhulule.
2. Ngokunjalo, cinezela ngokukhawuleza Iqhosha elisezantsi yevolumu kwaye uyikhulule.
3. Ngoku, cinezela ubambe Icala iqhosha de i-iPhone yakho iqale kwakhona.
4. Qhubeka ubambe Icala iqhosha de ubone ifayile ye qhagamshela kwikhompyuter Isikrini sivela kwiselfowuni, njengoko kubonisiwe ngezantsi.
5. Gcina iqhosha licofiwe de isixhobo sakho se-iOS singene imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo .
Funda kwakhona: Ungayibuyisela njani nzima i-iPad Mini
3B. I-iPhone 8 okanye kamva
1. Cinezela u IVolumu phezulu iqhosha kwaye ulishiye.
2. Ngoku, cinezela IVolumu ezantsi iqhosha kwaye uyiyeke ihambe.
Uhlaziyo lweWindows ngo-1903 aluyi kufaka
3. Emva koko, cinezela ixesha elide Icala iqhosha de isixhobo sakho singene kwimowudi yokubuyisela, njengoko kuchaziwe ngaphambili.
3C. I-iPhone 7 okanye i-iPhone 7 Plus okanye i-iPod touch (isizukulwana sesi-7)
Cinezela kwaye ubambe IVolumu ezantsi iqhosha kunye Ukulala / Vusa iqhosha ngaxeshanye de ubone isixhobo sakho singena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Lungisa iiNkqubo zokuBanda kunye nokuGqubeka kwi-Android
Ungazinyanzela njani iiNkqubo kwiKhadi le-SD kwi-Android
Yintoni iAAE File Extension?
Siyathemba ukuba esi sikhokelo sasiluncedo kwaye wakwazi ukulungisa umba ovaliweyo we-iPhone. Sazise ukuba yeyiphi indlela ekusebenzele kakuhle. Ukuba unemibuzo / izimvo ngokubhekisele kweli nqaku, zive ukhululekile ukuziphosa kwicandelo lamagqabaza.
uqhagamshela njani windows 10 isitshixo kwiakhawunti yeMicrosoft
windows 10 uhlaziyo lwanamathela ku-0
windows 10 igcina ukufaka uhlaziyo olufanayo
Inkonzo yokuprinta eyonakalisayo ayisebenzi
Ndifumana njani umshicileli wam kwimeko enempazamo?